I-Syncwire yenza kube lula kuwe ukuba ukhethe iintambo eziqinisekisiweyo ze-MFi kunye nezinto ezincedisayo | Ndisuka kuMac
I-Syncwire yenza kube lula kuwe ukuba ukhethe iintambo eziqinisekisiweyo ze-MFi kunye nezixhobo
Enye yeengxaki esizifumanayo xa sithenga intambo okanye itshaja yeMac, i-iPhone okanye i-iPad yethu kukuba iyahambelana ngokupheleleyo kwaye ingqinwe ngumenzi. Oku Kubalulekile zombini ukudlulisa idatha kunye nokukwazi ukuhlawulisa ngokukhuselekileyo izixhobo zethu.
Kule meko I-Syncwire firm inika abasebenzisi be-Apple uluhlu lweentambo kunye nezixhobo ze-Mac, i-iPhone, i-iPad, i-Apple Watch kunye nezinye izixhobo ze-Apple ezinesatifikethi se-MFi (Yenzelwe i-iPhone) ukuze ziqinisekise ukusebenza okugqibeleleyo kunye nokhuseleko.
Ngoku ukuba iiholide ziyeza kwaye asazi ukuba ukunikela kunokuba nomdla kuninzi lwenu, ngoko namhlanje siza kubona uluhlu lweemveliso inokulingana ngokugqibeleleyo njengesipho esinye seholide, kunye nesipho esiluncedo ngokwenene. Kukho izincedisi ezahlukeneyo esinazo etafileni yokuba ndisuka eMac namhlanje, kodwa eSyncwire zinezinye ezininzi onokuthi uzibone kwaye uzithenge. ngqo kwiwebhusayithi yayo esemthethweni. Ewe nabo banevenkile eAmazon.
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuqaphela ukuba ngenxa yentsebenziswano kunye ne-Syncwire, abasebenzisi be-Soy de Mac baya kunandipha iikhowudi zesaphulelo ekuthengeni kwabo. Ezi iikhowudi isaphulelo ukusuka 15 ukuya 30% kwezinye zeemveliso esiza kuzibona ngezantsi.
1 Umbane ukuya kwi-adaptha yejekhi ye-3,5mm
2 I-2m ubude be-USB A ukuya kwiintambo ze-USB C
3 USB C ukuya kumbane ukutshaja i-iPhone
4 Ibhegi engenamanzi ye-iPhone enesatifikethi se-IP68
Umbane ukuya kwi-adaptha yejekhi ye-3,5mm
Le yenye yeentambo esizisebenzisa kakhulu abo basebenzisi “banento yokuzonwabisa” yokusebenzisa ii-headphones ezineentambo. Ngale ndlela iSyncwire inesincedisi esiqinisekisiweyo nesisemgangathweni ngokwenyani njengoko injalo Syncwire Lightning ukuya 3,5mm jack cable.
Kule meko, kubo bonke abo bafuna ukuthenga le ncedisi, i-firm isinika a 30% isaphulelo kwixabiso lakho ukuhla ukusuka 19,99 ukuya 13,99 euro usebenzisa ikhowudi isaphulelo TCWL5UM7 ngexesha lokuhlawula.
Singathenga umbala omhlophe okanye omnyama wale 3,5mm yeadaptha yejack kwaye njengakwimveliso ezininzi zeSyncwire intambo iyiyo. inenayiloni ekwaziyo ukumelana ne-brasion kunye ne-twist. Ezi ntlobo zeentambo zinokumelana nokwenyani ekuhambeni kwexesha.
I-2m ubude be-USB A ukuya kwiintambo ze-USB C
Kule nkampani sifumana zonke iintlobo zezincedisi kwaye ukuba ufuna ukuhlawulisa iMac yakho ngentambo ende ye-USB ungayenza ngokuthe ngqo ngale nto. iseti yeentambo ezimbini ze-USB A ukuya kwi-USB C yintoni iSyncwire isinika yona kwaye yintoni ibini kunye nekhowudi iya kuba yi-euro eyi-13,29 TC61730OFF.
Kule meko kukho iintambo eziqhelekileyo esinokuzifumana ngokulula kwimarike, kodwa umgangatho wokugqitywa kolu phawu ngokungathandabuzekiyo ingongoma ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Makhe sibone ukuba yintoni na ukugqiba kwezi ntambo kwiwebhusayithi yeAmazon. Ngokungathandabuzekiyo imveliso esebenzayo kunye nobude beemitha ezi-2 inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokutshaja.
Kule meko, umbala wekhebula lokutshaja umnyama kwaye asinakho ukhetho lokuthenga umhlophe. Kufuneka nje ujonge ukomelela kwekhonkco ngokwayo ukuqonda ukuba sijongene intambo eyenziwe kakuhle enemigangatho ephezulu yokugqiba.
USB C ukuya kumbane ukutshaja i-iPhone
Njengoko ubona kwifayile ye- Syncwire web uya kufumana isandla esihle sezixhobo, iintambo kunye nokunye. Enye into enomdla kuthi kakhulu yile intambo enoqhagamshelo lwe-USB C kwizibuko loMbane malunga neemitha ezi-2 ubude. Kule meko, ikhebula lifumaneka kumnyama nomhlophe. Ukongeza kokukhetha ukungakhethi intambo ende, banomnye omalunga nemitha enye.
El ikhowudi isaphulelo kule cable yi CL55830OFF kwaye sinako khetha phakathi kwemibala emibini abayinikezelayo. Izigqibo kule ntambo zikwakumgangatho ophezulu kunye nenayiloni ephothiweyo ukunika ukuxhathisa okulungileyo ngokwenene kunye namachweba aneziphelo ezixhathisayo kwaye zithembekile xa zixhunywa. Ixabiso layo elithotyiweyo yi-euro eyi-13,99.
Ibhegi engenamanzi ye-iPhone enesatifikethi se-IP68
Esi sesinye sezincedisi ngokuqinisekileyo abaninzi benu banokucela le Krisimesi njengesipho kwaye inokuba luncedo ngokwenene kwiimeko ezininzi. Ukuba ne-iPhone kubhaka kunokukhusela kukothuka okanye nakumanzi, kodwa xa lo bhaka kufuneka umelane namanzi amaninzi inokuba i-smartphone yethu iba manzi. Kule meko kunye nesi sincedisi into esiyifumanayo ukhuseleko olupheleleyo kumanzi, uthuli kunye nokungcola.
Yibhegi ethe kratya kuneebhegi eziqhelekileyo esibeka kuzo ifowuni kwaye sinako siphathe kuyo ii-AirPods zethu, i-iPhone, ipasipoti kunye nenye into. Ngale ndlela, sinokuthi kungaphezulu kwepakethi yefanny ukuthwala i-iPhone, intambo kunye nezinye izixhobo ezikhuselweyo kakuhle. Yongeza umtya wokuthwala yonke into esinqeni okanye uyigcine engxoweni.
Ngaphakathi kwebhokisi yale ngxowa ye-Syncwire yongeza iiyunithi ezimbini. Ixabiso ngaphandle kwesaphulelo yi-euro eyi-16,99 kodwa sinokufaka ikhowudi PC62915OFF ekuthengeni kwaye usisindise i-15% yexabiso. Kule meko, ukuvalwa kwayo kwenziwe ngamalungu amathathu okutywinwa kunye ne-velcro esongwayo phezulu enikezela ukuchasana ngokupheleleyo nokungena kwamanzi, isanti okanye ukungcola ngokubanzi. Le yenye yeemveliso ezifanelekileyo zokuya elunxwemeni, ezintabeni okanye kuhambo nje lokugcina amaxwebhu kunye ne-iPhone yethu ikhuselekile.
Ukuvalwa kwale bhegi ngokwenene hermetic kubonakala kukhuselekile kakhulu, oku kunokujongwa ngexesha lokuvula. Yimveliso yokhuselo ke ngoko kufuneka ujonge ukuba yonke into ivalwe ngokufanelekileyo phambi kokuba uyisebenzise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Syncwire yenza kube lula kuwe ukuba ukhethe iintambo eziqinisekisiweyo ze-MFi kunye nezixhobo
I-AWS yongeza i-Mac minis kunye neprosesa ye-M1 kwiqonga layo lokugcina